Imandarmedia.com.np: समयमै महिनावारी नहुनुको कारण के हो ? जान्नुहोस्
Health Lifestyle, Lifestyle, Lifestyle News » समयमै महिनावारी नहुनुको कारण के हो ? जान्नुहोस्
समयमै महिनावारी नहुनुको कारण के हो ? जान्नुहोस्
महिनावारी समयमै नभएको गुनासो गर्ने महिलाको सँख्या दिनानु दिन बढ्दै गएको छ । नियमित समयमा महिनावारी नहुनुको कारणमा हर्मोनको असन्तुलन एक कारण हो।
केही महिलामा १५ दिनको फरकमा पनि महिनावारी हुने समस्या हुन्छ । यो एकदम कम महिलामा हुने समस्या हो । महिनावारी हुने तालिका पहिलेदेखि नै १५ दिन रहेको भए सामान्य नै हो ।
एक्कासी १५ दिनमै फेरि दोहोरियो भने चाहिँ कुनै खराबी आएको बुझनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा चाहिँ ढिलो नगरी चेकजाँच गराउँदा राम्रो हुन्छ ।
‘महिनावारी गडबढी व्यक्तिपिच्छे फरक पर्ने हुन्छ । २८ वा ३० दिनमै महिनावरी हुनु पर्ने कुनै नियम छैन । शुरु देखि जस्तो भइरहेको छ । अहिले पनि त्यस्तै हो भने त्यो सामान्य हो । यसैगरी तीन चार दिनको तलमाथि हुनुलाई पनि सामान्य नै मानिन्छ ।
अनियमित महिनावारीले हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि असर पारिरहेको हुन्छ । यसबाट जोगिन शरीरलाइै चाहिने पोषक तत्वको नियमित सेवन गर्नुपर्छ ।
तनावलाई कम गर्ने विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस्तै समय–समयमा थाइराइड जचाइ राख्ने एवम् डाक्टरको परामर्श लिइरहने गर्नुपर्छ ।
Trending : Health Lifestyle, Lifestyle, Lifestyle News